Manamboninahitra lefitra eto amin’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
Manamboninahitra lefitra eto amin’ny Antenimierandoholona
Nandray anjara tamin’ny fanamarihana ny fankalazana ny « Fetin’ny Manamboninahitra lefitra » manerana an’i Madagasikara ireo manamboninahitra lefitra eto anivon’ny Antenimierandoholona, ny zoma 01 febroary 2019 izay notanterahina teto amin’ny Lapan’Anosikely.
Ny taona 1963 no nankalazana voalohany ity andro manan-daza ity izay feno 56 taona katroka amin’izao.
Nisy araka izany ny fomba fanao izay nosantarina tamin’ny fanatanjahan-tena, nisy ihany koa ny fanolorana solom-body akoho (Gisa) ho an’ny talen’ny kabinetran’ny Antenimierandoholona RAKOTONIRINA Luc Marcel izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, sy ny lehiben’ny Fiarovana Andriamatoa RATSIMBAZAFY Rinah ho fanamarihana ny fitsingerenan’izany vanim-potoana izany. Nandritra ny raharaha miaramila izay notanterahina dia ny zandriny indrindra no nandray ny fibaikoana dia ny Sergent VAHANTANA Festos Larissa, ary ny Manamboninahitra lefitra zokiny indrindra amin’izy ireo dia ny « Gendarme principale de classe exceptionnelle » RANDRIANERA Norbert.
Ny manamboninahitra lefitra no andry iankinan’ny tafika, izay manana ny tarigetrany dia ny firaisan-kina, ny fototra ary ny fahombiazana izany. Miisa 87 ny manamboninahitra lefitra eto amin’ity Andrimpanjakana ity izay ahitana miaramila, zandary ary tafika ka ny tafika no tena mankalaza ity andro ity fa ny fanehoana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana no endrika lehibe nanehoan’izy ireo izany fankalazana izany teto amin’ny Antenimierandoholona.
Tonga nanotrona ity lanonana ity ireo manamboninahitra ambony eto anivon’ity Andrimpanjakana ity.